पूर्व सचिव लेख्छन मलाई किताव छपाउने जाँगर छैंन Globe Nepal News Portal
भीम उपाध्याय/ मलाई किताब छपाउने रहर नलाग्नुको पछाडि छापेको किताब बिक्री गर्न नै हैरान देखेरै हो पढ्ने कुरा त कता हो कता! किताब लेखकहरू आफै लगानी गरेर छपाउछन् र अफिस अफिस चिनजान व्यक्तिको घरदैलो दैलो किन्दिनु पर्यो भन्दै भिडाउछन् । यसरी किनिएको किताब ८०% कसैले पढ्दैनन् र ती अफिसको स्टोरको कुनामा वा कसैको घरमा पुगेर थन्किन पुग्छन् !
अहिले किताब छपाउदा प्रकाशक र लेखकको सॉठगाठमा मार्केटिंग विज्ञापन तामझाम गरिन्छ र मानिसलाई किन्न उत्साहित गरिन्छ । लेखकले वल्लतल्ल जम्मा गरेको पैसाले किताब छपाएको हुन्छ अनि उसले तामझामका लागि कहॉबाट ल्याओस थप लगानी !
मेरा अहिले सम्ममा ३/४ सय जति लेख विभिन्न दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रपत्रिकामा छापिए होलान्, तिनलाई संग्रह वनाएर संपादन गरेर २/४ थान किताब निकाल्न सकिने अवस्था छु तर अन्य लेखकले भोगेका हविगत देख्दा प्रकाशन गराउन उत्साहित हुन सकिरहेको छैन । कागज वनाउन रूख काट्नुपर्छ, रूख हुर्काउन करोडौ लिटर पानीको दरकार पर्छ, पुस्तक वेकामको हुन गयो भने पर्यावरणको खति मात्र हुने हुन्छ । विनसित्तै यी खति किन गर्नू भन्ने पनि लाग्ने गर्छ !
लेखनाथ भण्डारी सम्भावनाको खेल वा असहिष्णु प्रतिस्पर्धा मात्र मान्ने हो भने त राजनीतिमा...